Jay-Z's Blueprint Trilogy Inodzokera kuApple Music | Ndinobva mac
Jay-Z's Blueprint trilogy inodzokera kuApple Music
Nhasi, iyo yekumhanyisa mimhanzi sevhisi Tidal ndiyo yega inotipa iyo HiFi mhando, ichi chiri chimwe cheicho chikuru chinokwezva. Ndozvowo chete izvo zviri zvakanyanya chikamu chiri inotungamirirwa nevamwe vanyori zvakananga, kwete nemakambani ekurekodha, sezvinoitika muchikamu neSpotify. Zvisinei, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
Iwo maartist kumashure kweSpotify saJay-Z, Beyoncé, Madonna pakati pevamwe vakaedza kuhwina vashandisi zvichibva pane zvakasarudzika zvebasa ravo, kumanikidza vashandisi vemamwe mapuratifomu kuti vashandise Tidal kana vachida kunakidzwa nemumhanzi wavo. Zvishoma nezvishoma, zvinoita sekunge vari kudonha kubva padhongi.
Muna 2016, Jay-Z akabvisa Blueprint trilogy kubva kune ese masevhisi emimhanzi masevhisi, kunze kwekuTidal, uko kwave kuripo kwemakore matatu apfuura. Asi raive risiri iro chete basa raingove muTidal weuyu muimbi.
Sezvo makore apfuura, zvishoma nezvishoma Jay-Z yanga ichisanganisira chikamu che discography mune yese yekumhanyisa mimhanzi masevhisi. Chazvino kurova zvese Apple Music uye Jay-Z's mamwe masevhisi emimhanzi masevhisi ndeye Blueprint trilogy. Hatife takaziva izvo zvakakwanisa kuita uyu muimbi achinje pfungwa, uyo ane chikamu chaTidal uye agara achidzivirira mimhanzi yebasa rake nembambo.
Chikamu chekutanga cheBlueprint chakatangwa muna 2001, ichi chiri chakanakisa pane ese akazouya mumashure. Gore rakatevera chikamu chechipiri chakaburitswa apo vateveri vaJay-Z vaifanira kumirira kusvika 2009 kuti vanakidzwe nechikamu chechitatu uye chekupedzisira. Kunze kweye Jay-Z's dambarefu rebhuku Reasonable Doubt, yakatangwa pamusika muna1996, parizvino runyorwa rweJay-Z rwuri kutowanikwa pane ese Apple Music uye Spotify, YouTube Music ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Jay-Z's Blueprint trilogy inodzokera kuApple Music
Munguva pfupi Apple ichavhura chitoro chechipiri muTaiwan
Sezvinotarisirwa, iyo nyowani 8-musimboti MacBook Pro inodambura zvinyorwa zveBenchmark